ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ကားများ | တစ်ပတ်ရစ်နဲ့ ကားအသစ်များကို ၀ယ်ယူလိုက်ပါ။ Carmudi Myanmar [Burma]
Tinted Glass (4)
Morris Garages MG3 2013(USD 16500)
LS Auto Mobile
Blue Morris Garages MG3 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJZ14C37DS100400) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်...
Pearl White Morris Garages MG3 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJZ14C3XDS099050) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Morris Garages MG3 X ross 2014...
Orange Morris Garages MG3 X ross 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJ14E93DS097464) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Silver Morris Garages MG3 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် LSJZ14C31DS099048) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သ...
ပွင့်လင်းလာတဲ့ ခေတ်တစ်ခတ်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ မော်တော်ယာဉ် တင်ပို့ရောင်းချမှု များစွာတွင်ကျယ်လာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ ကားဟောင်းစလစ်တွေနဲ့ အလှယ်အထပ်ပြီးပြု ကားတွေ တင်သွင့်လာကြရာမှ အခုဆို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး လက်ရှိ ၂၀၁၅ မှာဆို မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေကိုသာ တင်သွင်းရတော့မှာ ဖြစ်ပြီး CIF ဈေးတွေလည်း ထပ်မံပြောင်းလဲ‌‌နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားတွေလေလံကနေ တင်သွင်းရတာ အဆင်ပြေလွန်းတော့ အခုဆိုပြည်တွင်းမှာ လမ်းတွေ ပိတ်ကား ယာဉ်ကြောတွေပိတ်ပိတ်နေတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂုံးကျော်တံတားတွေ ကြိုးစားပြီး ဆောက်ထားပေးပေမဲ့လည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ လမ်းတွေကပဲ ကျဉ်းနေသလားဆိုတာကိုတော့ ဝေခွဲမရခဲ့ပါဘူး။ ကားနေ့စဉ် ပိတ်နေပေမဲ့လည်း မော်တော်ယာဉ် ရောင်းဝယ်မှုမှာ သူအနေအထားနဲ့သူ ရှိနေပြီး မှာယှုတင်သွင်းမှုတွေက မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ပြည်ပ ကုမ္ပဏီတွေကလည်း ပြည်တွင်းကို ဌင်းတို့ အရောင်းပြခန်းတွေဖွင့်ပြီး ပရိုမိုရှင်းတွေ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကဆိုရင် အမေရိကန် ဘရန်ကား ရိူးရွန်ဖြစ်တဲ့ Chevrolet နဲ့ ဂျပန် ဘရန်ဖြစ်တဲ့ မာဇတာ ရိူးရွန်တွေကို ပြည်တွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ နိုင်ငံခြား ၇ှိုးရွန်တွေ ပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘရန်နယူးကားဈေးကွက်မှာ ပိုပြီး ဈေးကွက် ခိုင်မာလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်တော်ယာဉ် စုံစမ်းကြည့်ရူ ရောင်းချဝယ်ယူနိုင်မဲ့ နေရာများ
လက်ရှိမှာ ကားဝယ်ယူမည့်သူများ အနေနဲ့ ကားရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည့်နည်းများမှာ အရင်က ပြည်ပကနေတင်ပို့ပြီးလာတဲ့ကားတွေကို မှာယူရာကနေ လက်ရှိမှာ လေလံကရော ပြည်တွင်းကားရိူးရွန်တွေကလည်း အမြောက်အမြား ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာနိုင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အမြင်မှာ ၀ယ်ယူရာတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိစိတ်ကြိုက်လည်း ရွေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိအနေနဲ့ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေကို ၀ယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်း အပြင်ဖက် ကားဈေးကွက်တွေ ဖြစ်တဲ့ သီရီမင်္ဂလာဈေးကားရောင်းဝယ်ရေး နေရာနဲ့ လိူင် ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းနဲ့ အခြားနေရာတွေ ဖြစ်တဲ့ သံသုမာ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးနေရာတွေမှာ စုံစမ်းကြည့်ရူနိုင်မဲ့ အပြင် ကုမ္ပဏီကနေတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး အခြားအွန်လိုင်း ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေကနေလည်း ကားပြင်ပရောင်းချသူများရဲ့ စုစည်းမှုတွေကို အဆင်ပြေစွာ အပြင်သွားစရာ မလိုပဲ ကြည့်ရူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ရန်ကုန် ကားဈေးကွက် အခြေအနေ
CIF ဈေးနှုန်းများ အပြောင်းအလဲနဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို စောင့်ဆိုင်း နေရာတဲ့ အချိန်များဖြစ်တဲ့ အတွက် ကားအရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်မှာလည်း အနည်းငယ် လှုပ်ရှားခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားဈေးကွက် အတွက် ပစ်ကပ်ထရပ်တွေကို ကုန်သွယ်ယာဉ်အနေဖြင့် တင်သွင်းလာတဲ့နောက်မှာ ကားအနောက်က အဖုံးတွေ ပါဝင်တဲ့ အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဆောင်ရတဲ့ အပေါ် ၀ယ်ယူသူများဖက်ကနေ ပေါ်လစီထုတ်သူတွေကို ပြောစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ကား ဈေးကွက်ဟာလည်း ပိတ်သိမ်းမှုတွေကြာမှာ တည်ရှိနေပြီး ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ပြိုင်ကားများကိုသာ မွမ်းမံပြီး အရောင်းအ၀ယ်ပြုနေကြပြီး လက်ရှိကန်နေတဲ့ အစီးရေသာ ကုန်သွားပါက ပြိုင်ကားဈေးဟာ တက်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အချို့သော စပေါ့ ပုံစံတွေ ဖြစ်တဲ့ Subaru Impreza နဲ့ Mitsubishi Evolution တို့မှာ ပိတ်သိမ်းတဲ့ ပြိုင်ကား စာရင်းတွေ မပါဝင်ခဲ့ဘဲ ကျန်ရှိနေပါတယ်။ ထိုကြောင့် ထိုအမျိုးအစားနှစ်ခုမှာ ၂၀၁၅ တွင် တင်သွင်းမှု မှာ ရေပန်းစားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ လက်ရှိ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင် ကားရောင်းဝယ်ရေး စင်တာများနဲ့ ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းများတွင် အရောင်းအ၉ယ် အနည်းငယ် အေးစက်နေပြီး CIF ဈေးကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ထွက်ရှိလာမဲ့ CIF ဈေးနှုန်းတွင် ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်ပြောင်းလဲ နိုင်သည် ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီကားများဖြစ်သည့် ပရိုဘောက်နဲ့ အေဒီ ဗန်၊ ဟွန်ဒါ ဖက်တို့လောက်ကို တက္ကစီ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တဲ့ သူတွေမှာ အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်နေပြီး ကျန်တဲ့ စလစ်ကပ်ပြီး အများဆုံး သွင်းကြတဲ့ တိုယိုတာ ကလူဂါနဲ့ တိုယိုတာ ၀ရ်ှတို့ဟာ အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
စလစ်ကပ်ကားများဖြစ်သည့် တိုယိုတာ ဟိုက်လပ်စ် စပ်ဖ် ၊ လန်ခရုဇာ ၊ တိုယိုတာ ၀စ်ရှ် ၊ ကလုဂါ ၊ တိုယိုတာ ရတ်ဖိုး စသည့်ကားများမှာ စလစ်အတက်အကျပေါ်မူတည်၍ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ဒါက‌တော့ တိုယိုတာ ကားများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စပ်ဖ် ၂၀၀၀ မော်ဒယ်(ဒီဇယ်) မှာ ကျပ် သိန်း ၂၆၀ ၀န်းကျင် ၊ လန်ခရုဇာ ၉၉ မော်ဒယ်မှာ ကျပ်သိန်း ၃၇၀ ၀န်းကျင် ၊ ၀စ်ရှ် ၂၀၀၃ မော်ဒယ် (၂၀၀၀ စီစီ) မှာ ၁၄၅ သိန်းဝန်းကျင်နှင့် (၁၈၀၀ စီစီ) မှာ သိန်း ၁၅၀ ၀န်းကျင် ၊ ကလုဂါ၂၀၀၄ မော်ဒယ်မှာ ၁၈၂ သိန်းဝန်းကျင် ၊ ရတ်ဖိုး ၂၀၀၃ မော်ဒယ်မှာ ၁၈၂ သိန်းဝန်းကျင် ၊ ‌ရွှေငါး ၂၀၀၃ မော်ဒယ်မှာ သိန်း ၁၆၀ ၀န်းကျင်နှင့် ၂၀၀၄ မော်ဒယ်မှာ သိန်း ၁၈၀ ၀န်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မန်းလေးမှာတော့ ရန်ကုန်ကားဈေးကွက်နဲ့ မတူဘဲ နှစ်ပေါင်းကြာပြီး တန်ဖိုးမြင့်ကားတွေဖြစ်တဲ့ မတ်တူးနဲ့ ပါကျဲရိုး၊ ပရာဒို အစရှိ နာမည်ကြီးကားတွေ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကားရောင်းဝယ်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ နှစ် ၂၀ နီးပါးရှိနေတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ကားတွေက ကောင်းလျက်ရှိပြီး တစ်ချို့ဆို မစီးဘဲ သိမ်းထားတာတွေ ကြောင့်ပါလို့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်နေတဲ့ ဈေးနှုန်းများအနေနဲ့ အေဒီဗန် (တက္ကစီအနီ) ၁၅၀၀ စီစီတွေမှာ သိန်း ၈၀ကျော်နီးပါးလောက်ရှိပြီး အနက် လိုင်စင်တွေမှာ ၉၀ ကျပ်သိန်းနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ အေဒီဗန် (တက္ကစီအနီ) ၁၃၀၀ စီစီတွေကတော့ ၇၅ သိန်းနီးပါးမှာ ရှိပြီး ၁၃၀၀ စီစီ အေဒီဗန် အနက်တွေကတော့ ၈၅ သိန်းနီးပါးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ထပ်အနေနဲ့ မန္တလေးကားဈေးကွက်အတွင်း CIF တန်ဖိုး ဒေါ်လာ တစ်သောင်းခွဲအောက် ကားများဖြစ်သည့် တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ်၊ တိုယိုတာ အပဆမ် ၊ တိုယိုတာ ဖီဒါ ၊ တိုယိုတာ ဘယ်တာ ၊ ဟွန်ဒါ ဖစ် ၊ စီအာဗီ ၊ တိုယိုတာ ခရောင့် အစရှိသည့်ကားများလည်း အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
တင်ပို့ပုံ ပုံစံက ဈေးနှုန်းကို ကွာခြားစေပုံ
တင်သွင်းလာတဲ့ကားတွေအပေါ် ဈေးနှုန်းမှာ ရောက်ရှိလာတဲ့ ပုံပေါ်မှုတည်ပြီး ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်ကွာခြားလျက်ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ တင်ပို့ကြတဲ့ကားတွေကို ရေကြောင်းဖြင့်သာ တင်ပို့ကြတာတွေကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ပစ်ကပ်များရဲ့ တင်သွင်းမှုမှာတော့ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၅ သိန်းလောက် ကွာကြောင်း သိရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအချို့သာလျှင် နယ်စပ်က တင်သွင်းကြတာ ဖြစ်ပြီး ရေကြောင်းနဲ့ နယ်စပ်ကနေ တင်ပို့မှုမှာ ဈေးနှုန်းကွာခြားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက သက်သာတယ်ဆိုသော်လည်း ကားရဲ့ အရည်အသွေးပေါ်တွင် မှုတည်ပြီး အဓိက ကားဝယ်သူတွေက ၀ယ်ယူမှုကို စဉ်းစားကြကြောင့် သိရပါတယ်။ ထို့တင်သွင်းမှုတွေမှာ ဈေနှုန်းက ကွာသလို အရည်အသွေးကလည်း ကွာသေးတာကို တွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမှု ကားဝယ်တော့မယ် ဆိုရင် ယုံကြည့်စိတ်ချရတဲ့ ရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေ ကနေ ၀ယ်ယူသင့်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဈေးကွက် အနေအထားနဲ့ ယာဉ်အခြေအနေကို စစ်ဆေး စုံစမ်းရဖို့ ရှိပြီး ကားရောင်းတော့မယ် ဆိုရင်တော့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်း သက်သာတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေကနေ တစ်ဆင့် အကူအညီအားဖြင့် ၀င်ရောက် ရောင်းချခြင်းဟာ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာအင်တာနက်ခေတ်မှာ အထောက်အကူသဖွယ် ဖြစ်လျက်ရှ်ိသည်ကို ပြောကြားနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Morris Garages မော်ဒယ်
Morris Garages MG5
Morris Garages MG6